Efa nampoizina Ilay notendren’ny Filoha no lasa Filohan’ny CENI
Nivoaka ofisialy omaly alatsinainy 06 desambra 2021 ny firafitry ny Birao maharitry ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana na ny CENI,
taorian’ny fahavitan’ny fianianan’ireo mpikambana miisa 9 ny 01 desambra lasa teo. Araka ny efa nampoizina, ny olona natolotry ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina no nofidian’ireo mpikambana 7 tamin’ny 9 ho Filohan’ny CENI dia Atoa Dama Andrianarisedo Retaf Arsène, izay mpitsara talohan’ny naha mpikamban’ny CENI azy. Tsara ny manamarika fa vadin’ny Minisitry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy Rtoa Gisèle Ranampy ihany koa ity Filohan’ny CENI vaovao ity, izay toa endrika maneho fa manana rohy amin’ny fahefana mpanatanteraka ny tenany, ary efa nitondran’ny mpanohitra kiana fa tsy misy fisaharam-pahefana. Izy izany no ho eo amin’ny Familiana ity vaomiera hisahana ny fifidianana ity manomboka izao, handimby an’Atoa Hery Rakotomanana. Ekena fa nanao fombafomba ara-pianianana ny mpikamban’ny CENI, fa tsy hanao ny asany am-pahamarinana, tsy hitanila fa hanao ny asany araka ny voafaritry ny lalàna sy ny lalàm-panorenana, saingy hanahirana ihany ny hahazoany fahatokisana amin’ny herivelona rehetra, raha zohiana hatrany am-piandohana ny tantara. Vao mainka karazan’ny manome bala hitifiran’ny mpanohitra eo anatrehan’ny hoe: olona izay natolotry ny Filoham-pirenena no lasa Filohan’ny CENI. Efa nilaza, ohatra, Atoa Marc Ravalomanana fa ny Filoha ankehitriny Atoa Andry Rajoelina dia azo antoka ny mbola hirotsahany kanefa ny CENI azy ny ankamaroan’ny mpikambana. Tsy azo ekena ny firafitry ny CENI amin’izao fotoana, fa mitongilana sy anjakan’ny loko volom-boasary, hoy ny fanehoan-kevitra politika avy amin’ny mpanohitra. Tena afaka hitondra lamina ara-politika amin’ny alalan’ny fifidianana hokarakarainy ve ny CENI ankehitriny? Mikasika ireo mpikambana sasany moa, dia Filoha lefitra voalohany Atoa Andriamalazaray Andoniaina; Filoha lefitra faharoa Atoa Houssene Abdallah; Filoha lefitra fahatelo Atoa Razafimamonjy Laza Rabary, Mpampaka-teny voalohany Atoa Andriamarotafikatohanambahoaka Ralaisoavamanjaka, Mpampaka-teny Atoa Randrianarivonantoanina Tiana Ifanomezantsoa, Mpanolotsaina miisa 3 dia Jeannot Guy Georges Razafindraibe sy Atoa Ravalitera Jacques Michaël, ary Atoa Fidimiafy Roger Marc.
Ntsay Christian sy Tinoka Roberto Tratry ny “be manaiky ?
Tsy mba re feo tamin’ireo raharaha mafana mikasika ny departemanta sahaniny avy ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta Atoa Ntsay Christian sy ny Minisitry ny fitaterana Atoa Tinoka Roberto.
Hanitra Razafimanantsoa “Maro ny SEG nisolelaka sy nanao politika fa aiza izao ?”
Niteraka adihevitra goavana ny fanehoan-kevitry ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (SEG) Jeneraly Gellé Serge izay toa miantefa amin’ny mpanohitra amin’ny hetsika politika samihafa mety hitranga.
Resaka Nosy Malagasy Miala any indray ny fampanantenana poakaty
Hitohy amin’ny herinandro ambony ny fifampiraharahana mikasika ny Nosy Malagasy na Iles Eparses, araka ny nambaran’ny Minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina omaly.
Filankevitry ny minisitra Tsy voaresaka ny raharaha covid-19
Raha samy niandry izay mety ho fanapahan-kevitra vaovao mikasika ny fivoaran’ny valanaretina coronavirus ny rehetra omaly tao anatin’ny tatitry ny filankevitry ny Minisitra, dia tsy nahitana an’izay izany.